१ prayer प्रार्थनाले बाधा पुर्‍याउने मनोभाव बिरुद्द उक्साउँछ प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स १ prayer प्रार्थनाले बाधा पुर्‍याउने मनोभावहरूको बिरूद्ध अंकित गर्दछ
१ prayer प्रार्थनाले बाधा पुर्‍याउने मनोभावहरूको बिरूद्ध अंकित गर्दछ
भजन :24 १: १०:
7 ढोका हो, हेड। हे सनातनका ढोकाहरू, चूपचाप बस! महिमाको राजा आउनेछ।
के - के हुन् अवरोध आत्मा? यी शक्तिहरू हुन् जुन तपाईको सफलताको बिन्दुमा प्रतिरोध गर्दछन्। यी शक्तिहरू राक्षसी शक्तिहरू हुन् जुन परिवारहरूमा अवस्थित छन्, तिनीहरू किल्ला हुन् जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि कोही पनि त्यस परिवारमा केहि पनि सफल हुनेछैन। हिंस्रक आत्माहरू स्थिरताका लागि जिम्मेवार छन्, परिवारका अन्वेषकहरूको अकाल मृत्यु र गरिबीलाई घृणा। तर खुशीको खबर यी हुन्, यी हुन् १ h प्रार्थना पोइन्ट्स रोक्नको विरुद्ध आत्माले तपाईंलाई तपाईंको इच्छित विजय दिनेछ। जब हामी प्रार्थना गर्छौं, हामी अनौंठो शक्ति उत्पन्न गर्छौं, जब हामी प्रार्थना गर्छौं तब परमेश्वरको शक्ति हामीमा प्रकट हुन्छ। तपाईको जीवनमा विजय पाउन तपाईले प्रार्थनाको परिवर्तनमा यी बाधा पुर्‍याउने आत्माहरूको प्रतिरोध गर्नै पर्छ।
तपाईंले यस दुष्टात्माबाट जोगिनको लागि हिंस्रक प्रार्थना गर्नै पर्छ। हाम्रो भगवानलाई गर्न को लागी धेरै गाह्रो छैन, आज तपाईंले उहाँलाई पुकार्दा, उहाँ उठेर तपाईंको रक्षा गर्नुहुनेछ। उहाँ तपाईको जीवनमा तपाईलाई बलियो देखाउनु हुनेछ जस्तो कि पहिले कहिल्यै भएको छैन। यी प्रार्थनाहरूले बाधा पुर्‍याउने मनोभावको बिरूद्ध तपाइँलाई तपाइँको पूर्ण स्वतन्त्रतामा पुर्‍याउँछ। यस प्रार्थनाले विश्वासमा औंल्याएझैं तपाईको जीवन र परिवारका सबै अवरोधी मनोभावहरू येशूको नाममा सदाका लागि हराउनेछन्। म तपाईंलाई माथि देख्छु।
१. बुबा, अलौकिक रूपमा येशूको नाममा मलाई अगाडि बढाउनुभएकोमा म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु।
२. म घोषणा गर्दछु कि मेरो बाटो निरन्तर ज्योतिले भरिनेछ, येशूको नाममा सँधै बाधा हुनेछैन।
I. म मेरो आध्यात्मिक जीवनमा बाधाको हरेक आत्मालाई येशूको नाममा मेरो जीवनबाट अलग हुन आज्ञा गर्दछु।
I. म मेरो शारीरिक विकासमा बाधाको हरेक भावनालाई आदेश दिन्छु (स्वास्थ्य अनुसार) येशूको नाममा नष्ट हुन।
I. म मेरो वित्तीय र क्यारियर बृद्धि गर्न बाधा को हरेक भावना येशूको नाम मा dissap गर्न आज्ञा।
I. म गन्तव्यको लागि मेरो बाटोमा खडा हरेक शैतानी बाधा अब हटाउने आदेश दिन्छ !!! येशूको नाममा।
My) मेरो बाटोमा उभिरहेका सबै दुष्ट पुरुष वा महिलालाई येशूको नाममा अब फायरले नष्ट गरोस्।
Father. बुबा, मलाई सही ज्ञान दिनुहोस् जुन येशूको नाममा मलाई शीर्षमा पुग्नेछ
Father। बुबाले कुनै दुष्ट साथीको गोप्य रुपमा गोप्य रुपमा मेरो प्रगतिमा येशू नाममा लड्दै हुनुहुन्छ
१० हे प्रभु, येशूको नाममा मेरो जीवनलाई निम्त्याउन जम्मा गर्ने सबैलाई तितरबितर पार्नुहोस्।
११. तपाईंको स्वर्गदूतहरू येशूको नाममा शीर्षमा मेरो बाटोमा खडा सबै ठेस लाग्ने ठाउँ बगाउन दिनुहोस्
१२. म घोषणा गर्दछु कि मेरा खुला ढोका अगाडि उभिरहेका सबै शैतान येशूको नाममा विस्थापित हुनेछन्।
१ life. मेरो जीवनमा सबै दुष्ट सल्लाहकार, म तपाईंलाई सधैं येशूको नाममा चुप लाग्छ
१.. म घोषणा गर्दछु कि मेरो जीवनको हरेक अनुगमन भूत, येशूको नाममा सदाका लागि अन्धा हुनेछ।
१.. म घोषणा गर्दछु कि सोशल मिडियामा प्रत्येक अनुगमन राक्षस मेरो नाम सधैंभरि येशूको नाममा चुप लाग्नेछ।
अघिल्लो लेखमा२० वारफेयर प्रार्थना बिन्दु प्रगति दुश्मनहरूका विरुद्ध
अर्को लेखमा२० एमएफएम प्रार्थना ईश्वरीय अनुमोदनको लागि औंल्याउँछ
क्रिस्टोफर रामलाल डिसेम्बर २,, २०१ At ११::18। अपराह्न
शुभ दिउँसो, तपाईंसँग प्रार्थना अनुरोध साइट छ वा व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ? मलाई मेरो मेरुदण्ड र समग्र स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना चाहिन्छ, मलाई थाहा छैन यो मेरो स्वास्थ्य विरुद्ध आध्यात्मिक आक्रमण हो कि भनेर, धन्यवाद: क्रिस्टोफर रामलाल।
आर्थिक अस्वस्थता बिरुद्ध प्रार्थना अंक
प्रेमको बारेमा १०० बाइबल पदहरू
२० समुद्री पानी आत्माहरूबाट छुटकारा प्रार्थना पोइन्ट्स